नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : श्रीमती सीतालाई उपचार गराउने निहुँ मा किन थाइल्यान्ड हानिए पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड ?!
श्रीमती सीतालाई उपचार गराउने निहुँ मा किन थाइल्यान्ड हानिए पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड ?!
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीताको स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक प्रस्थान गरेका छन् । पत्नी सीता अस्वस्थ्य भए पछि उपचार गराउन आज दिउँसो थाईल्याण्डको राजधानी बैंकक प्रस्थान गरेको दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष दाहाल बुधबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । उनीहरुको बैंकक भ्रमणका बारेमा थप केही बताईएको छैन । बिस्वस्त सुत्रका अनुसार उनी श्रीमतिको उपचारका निहुँमा भारतीय र सँग बर्तमान नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा बार्ता गर्न त्यता हानिएका हुन । उनी यसै गरी कहिले चिनिया पक्ष सँग त कहिले भारतीय पक्ष सँग बार्ता गर्न बिभिन्न निहुँ पारेर सिँगापुर् र थाइल्यान्ड हानिने गरेका छन ।